Hlangana noCharlie Axel Woods, uNyana kaTiger Wood
Ukuhlangana nendodana kaTiger Wood (kwaye ewe, uCharlie udlala igalofu)
IGiger Woods kunye nomfazi wakhe wangaphambili u- Elin Nordegren babenabantwana ababini xa behlangene. Omnye unyana ogama linguCharlie. Igama lakhe elipheleleyo "nguCharlie Axel Woods" waza wazalwa ngoFebruwari 8, 2009.
Ngokungafani nokuzalwa kwentombi yakhe, uSam Alexis , okwenzeka emva komhla wokugqibela kwe- US Open tournament, i-Woods ayifanele ibalekele ekhaya ngokuzalwa kukaCharlie. Ngelo xesha, i-Woods yayisaphuma kwakhona kwiingcingo ezilandelayo emva kwe-2008 US Open kwaye yayingakabuyiselanga kwibalasethi yegalufa.
Wayesesekhaya, esebenza emdlalweni wakhe kwaye esebenzela ukubuyela kwisenzo xa uCharlie azalwa ngeCawa.
Ingaba nguCharlie okanye uCharles? Kwaye Kuthiwani Ngelo Igama Eliphakathi?
"UCharlie" akuyena igama lakhe lomnxeba; akuyiyo into eyenziwa nguTiger no-Elin kunokuba "uCharles." Igama likaCharlie alinguCharles. NguCharlie, ococekileyo nolula. Igama likaCharlie laphefumlelweyo, ubuncinane inxalenye, njengentela kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGorama yeQumrhu elidumileyo uCharlie Sifford. Ngamaxesha onke amahlathi abizwa ngokuba nguSifford enye yeqhawe lakhe, ngamanye amaxesha wambiwa ngokuba nguSifford "Omkhulu."
Kuthiwani ngelo gama eliphakathi, iAxel? Igama lika-Woods lentombi eliphakathi nguAlexis, ngoko abazali banamathele ngomxholo wabantwana abaphakathi. Kodwa kutheni iAxel? Umalume kaCharlie - umntakwabo ka-Elin - ubizwa ngeAxel.
Ngaba uCharlie Uhlala NoYise okanye uYise?
Hayi, njengoko wonke umntu uyazi, abazali bakaCharlie bahlukana. UCharlie wayeneminyaka engaphantsi kweminyaka emibini ubudala xa abazali bakhe beqhawula umtshato beqedile ngo-2010.
Njengenxalenye yaloo miqathango, uTiger no-Elin bavuma ukugcinwa ngokubambisana kwabantwana babo. Oku kuthetha uCharlie noSam bahlukanise ixesha phakathi kwabazali babo.
Ngaba uCharlie Woods Play Golf?
Ewe, oonyana bakaMatshixo ( khangela igalari yezithombe zezingane zeTiger Woods ) badlala igalofu, kodwa uCharlie ubonakala ethanda ngakumbi kunodade.
Kukho i-YouTube isiqeshana sikaCharlie eshukumisa iklabhu eneminyaka engama-4. Ngo-2015, xa uCharlie eneminyaka eyisithupha, uThomas uthi indodana yakhe yayinegulane ehamba phambili yegalufa luluphi na ilungu leentsapho ze-Woods, engeza, Ndizama ukwenza. "
Xa wayeneminyaka eyisixhenxe ubudala, phakathi no-2016, uCharlie wadlala kwindawo yakhe yokuqala yegalufa, umcimbi we-US Kids Golf eFlorida. Wagqiba okwesibini, ukudubula ama-55 kwizimbobo ezithoba.
Ngoxa uCharlie sele edlala ukudlala kwezemidlalo zegalufa zezingane, yena, njengodadewabo, uyathanda ukudlala ibhola yebhola ngaphezulu, ngokutsho kweTiger.
I-Dottie Pepper: i-Bio ye-LPGA enamandla kakhulu
Amakhonkco eNgxoxo - Ukudibanisa iingcinga zakho ngesiNgesi
Isingeniso kwiLizwi lesiFrentshi elithi Une Bête
5 Iincwadi ezithengisa kakhulu ezifunekayo Ukufunda Ukuqonda uDonald Trump
I-Biology Prefixes kunye neSaffixes: ana-
Iimfazwe zePunic: iMfazwe yaseCannae
7 DC ii-Comics ezifanelwe iifrimu ze-Animated
Zingaphi Iingxaki Zabafazi Abakho?
Umthetho woLuntu woLuntu wowe-1964 akazange awuphelise uMbutho woLingana
Indlela yokuthayipha i-Accents ngesiTaliyane kwiKhodibhodi
Yithi Unyaka Omnandi! Iimpawu eziMnandi ukuBhiyozelwa kabini
I-Phillips Exeter Academy: I-Admissions Idata neProfayili
Iziphakamiso ezinhlanu zeCigar ezivela kuNat Sherman zikaMichael Herklots